Ezigbo ọnụahịa Vietnam kristal na-acha ọcha mabụ maka ịchọ mma ụlọ
Ezigbo ọnụahịa Vietnam kristal na-acha ọcha mabụ maka ịchọ mma ụlọ
Mabụl na-acha ọcha kristal bụ marble ọcha dị ọcha.Marble ọcha kristal bụ ụdị nkume ọcha a na-agbawa na Vietnam nke a maara maka ọdịdị kristal ya na-egbuke egbuke.
kichin, ime ụlọ ịwụ, ala, mgbidi, ebe ọkụ gbara gburugburu, wdg.
Mabụl na-acha ọcha kristal bụ marble ọcha dị ọcha.Marble ọcha kristal bụ ụdị nkume ọcha a na-agbawa na Vietnam nke a maara maka ọdịdị kristal ya na-egbuke egbuke.Crystal White Vietnam Marble, Marble ọcha zuru oke, marble ọcha mmiri ara ehi, marble ọcha dị ọcha, marble polar ọcha, na marble kristal Vietnam bụ ụfọdụ aha ahịa ya ndị ọzọ.
A na-ahụ marble kristal dị ka otu n'ime nkume okike kacha mara mma na nke mara mma na mbara ala.Ọ bụ ụdị nkume dị nkọ nke a na-emepụta site na kristal nke lava gbazere.
A na-eji marble kristal eme ihe n'ọtụtụ ebe dị ka ala, ebe a na-arụ ọrụ, ebe ọkụ ihu, nhazi usoro marble, na ihe ndị ọzọ eji achọ mma n'ụlọ, ebe ọrụ, na ụlọ ọrụ azụmahịa.Ihe ịchọ mma ma ọ bụ ihe ụlọ ndị ọzọ, dị ka nkume nkịtị (granite, limestone, sandstone), osisi, iko, ma ọ bụ ígwè, nwere ike jikọta ya na marble ọcha kristal nke ọma iji mepụta ọnọdụ ọ bụla maka ọrụ gị!
Ihe kachasị ngwaahịa: marble eke, granite, onyx, agate, quartzite, travertine, slate, nkume arụrụ arụ, na ihe ndị ọzọ sitere na nkume.
Nke gara aga: Countertop slab breccia rose calacatta viola marble ịkpụ ka ọ dị nha
Osote: slab mabul na-acha ọcha nke China chara acha nke nwere veins ndụ ndụ
Taịlị marble isi awọ gbara ọchịchịrị chara acha maka ...
Polaris bianco sivec ọcha marble maka ...
Granite odo odo, Gray Granite, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Gray dị ọkụ, Black Granite, Ihe mgbakwasị ụkwụ Blue Granite,